सम्पूर्ण देशवासीको लागि अत्यन्तै दुःखत खबर. – List Khabar
Home / समाचार / सम्पूर्ण देशवासीको लागि अत्यन्तै दुःखत खबर.
सम्पूर्ण देशवासीको लागि अत्यन्तै दुःखत खबर.
admin August 14, 2021 समाचार Leaveacomment 168 Views
काठमाडौं । पछिल्लो दुई हप्ता यता उपत्यकाका अस्पतालहरुमा सङ्क्रमितका बिरामीहरु बढेका छन् । विभिन्न अस्पतालले जनाए अनुसार पछिल्लो दुई हप्तामा सङ्क्रमितका लागि छुट्याइएका साधारण बेडहरु भरिन लागेका छन् भने आईसीयू बेडहरु भरिइसकेका छन् ।यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा पनि पछिल्लो दुई साता यता सङ्क्रमितका बिरामी बढ्दै गएका छन् । टेकु अस्पतालका निर्देशक डा.अनुप बाँस्तोलाका अनुसार पछिल्लो दुई हप्तायता सङ्क्रमितका बिरामीहरु अस्पताल भर्ना हुन आउने क्रम बढेको हो ।
उहाँका अनुसार अस्पतालमा कोभिडका बिरामीका लागि छुट्याइएका ४० बेडहरुमध्ये २५ वटा बेडहरु भरिइसकेका भने आईसीयुका लागि छुट्याइएको २४ बेडहरु सबै भरिइसकेका छन् । पछिल्लो समय उपत्यका बाहिरबाट आउने कोभिडका विरामीको सङ्ख्यामा पनि भइरहेको उहाँले बताउनुभयो
यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा.सन्तकुमार दासका अनुसार पछिल्लो दुई हप्तायता अस्पतालमा भर्ना हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो । अस्पातालमा छुट्याइएको ४० बेडको आईसीयूमा सबै भरिइसकेको दासले बताउनुभयो । जसमध्ये १७ जना भेन्टिलेटरमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अस्पतालले अहिले बिरामीको लागि ११५ वटा साधारण बेडहरु छुट्याइएको छ जसमध्ये अहिले ८५ जना भर्ना भरिइसकेका छन् ।यस्तै ह्याम्स अस्पतालमा पनि पछिल्ला दिनहरुमा अस्पतालमा भर्ना हुन आउने ना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
अस्पतालका मिडिया कोअर्डिनेटर साजन राज भण्डारीका अनुसार पछिल्लो दुई हप्तायता अस्पतालमा आउने सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको हो । ह्याम्स अस्पतालमा कोभिडका लागि छुट्याइएका १३ वटा आईसीयू बेडहरु सबै भरिइसकेका छन् जसमध्ये पाँच जना भेन्टिलेटरमा छन् भने ४९ वटा साधारण बेडहरुमध्ये ४२ वटा बेडहरु भरिइसकेका छन् ।
नर्भिक अस्पतालमा पछिल्लो दुई हप्तामा बिरामीका लागि छुट्याइएका बेडहरु भरिएका छन् । अस्पतालका मिडिया कोअर्डिनेटर सोमनाथ बाँस्तोलाका अनुसार अस्पतालमा कोभिडका लागि छुट्याइएका ३६ वटा बेडहरु सबै भरिइसकेका छन् । ३६ वटा बेडहरुमध्ये १७ वटा साधारण बेड र अरु आईसीयू बेड छन् । तमीध्ये सबै बेडहरु भरिसकेकाले बाहिरबाट आउने नयाँ सङ्क्रमितहरुलाई बेड अभावका कारण अन्य अस्पतालहरुमा पठाउनुपरेको बास्तोलाको भनाइ छ ।
कोभिड युनिफाईड अस्पतालमा पनि सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भुपेन्द्रबहादुर बस्नेतका अनुुसार अहिले अस्पातालमा उपचारका लागि आउने सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । उहाँका अनुसार अस्पतालको साधारण र एचडीयू गरेर १६३ बेड क्षमता छ भने आईसीयू ४० बेडको छ । जसमध्ये अहिले आईसीयूमा २० जना रहेका छन् भने साधारण बेडमा ८८ जना उपचाररत छन् । पछिल्ला केही दिनमा आउने सङ्क्रमितको सङ्ख्या हेर्दा केही दिनमै अस्पतालमा रहेका सबै बेडहरु भरिन सक्ने उहाँको भनाइ छ । गोरखापत्र दैनिकमा यो खबर छ ।
Previous छोरा’छोरीकै सामु शरी’र सुम्पिन बा’ध्य पारिएकी यी महिलाको रुवाऊने कथा, टिप्परमा जे भयो भिडियो सहित
Next रामकुमार झाँक्री उपसभामुख बन्ने !